किन हुन्छ हिस्टेरिया अर्थात कन्भर्जन डिसअर्डर ? (भिडियोसहित) | Hamro Doctor News
बुधबार, २९ बैशाख २०७८ /
‘अक्सिजन छैन, कोरोनाका गम्भीर बिरामीको पनि भर्ना लिन सकिन्नँ’
चितवनका युवाको खबरदारीः ‘आईसियू, अक्सिजन र बेड अभावमा बिरामीको मृत्यु नहोस्’
चितवनमा गत २४ घण्टामा १० जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु, २ सय ४० जना आईसीयूमा
डोटीको बडीकेदार गाउँपालिकामै कोरोना संक्रमितको उपचार हुँदै
लगातार दोस्रोदिन ९ हजारभन्दा बढीमा संक्रमण, सक्रिय संक्रमिको संख्या एक लाख नजिक
किन हुन्छ हिस्टेरिया अर्थात कन्भर्जन डिसअर्डर ? (भिडियोसहित)
हिस्टेरिया भन्ने बित्तिकै यौनसँग सम्बन्धित रोग हो भन्ने धेरैको बुझाई छ । तर, यो बुझाई सही होइन । हिस्टेरिया यौनसँग सम्बन्धित भएर मात्रै लाग्ने रोग होइन ।
नेपालमा हिस्टेरियाका बिरामीहरू धेरै रहेको विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले देखाएको छ । हिस्टेरियालाई कन्भर्जन डिसअर्डर पनि भनिन्छ । के हो हिस्टेरिया वा कन्भर्जन डिसअर्डर ? यो लाग्ने कारण र बच्ने उपायबारे नशा तथा मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रदिप पाण्डेसँग गरिएको कुराकानी :-
के हो हिस्टेरिया ?
हाम्रो समाजमा अझै पनि हिस्टेरिया भन्ने बित्तिकै नकारात्मक धारणाले हेरिन्छ । यौनकुण्ठा वा यौन चाहाना पुरा नहँुदा लाग्ने रोगको रुपमा यसलाई चित्रित गरिन्छ । तर त्यसो होइनन, हिस्टेरिया भनेको मनसँग सम्बन्धित कुरा हो । अन्र्तमनमा भएका भावनालाई सही रुपमा व्यबस्थापन गर्न नसक्दा वा यस्ता भावनालाई दबाएर राख्दा हिस्टेरिया हुन्छ । वा गहिरो तनाव दिमागमा लामो समय गडेर बस्यो कोही कसैसँग व्यक्त गर्ने वातवरण भएन, तनावलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा हिस्टेरिया हुन सक्छ ।
एक्कासी बेहोस हुने । (मासहिस्टेरिया भयो भने एकपछि अर्को गर्दै धेरै जना बेहोस हुने )
टाउको दुख्ने ।
शरीरको कुनै एक भाग नचाल्ने ।
कोही कोही बिरामीमा बोली नआउने ।
लामो लामो श्वास फेर्ने ।
डर लाग्ने ।
महिलामा हिस्टेरिया किन बढी हुन्छ ?
हो, पुरुषको तुलानामा महिलामा हिस्टेरिया बढी हुने गरेको पाइन्छ । आठ महिलामा हिस्टेरिया भयो भने दुई पुरुषमा पनि यो देखिने गरेको छ । समाज जतिसुकै विकसित भएपनि अझै पनि महिलालाई बन्देज गर्ने प्रवृति अझै पनि कायमै छ । छोरीहरु जब बढ्दै जान्छन् अभिभावकले ठुली भयौं, छोरीले यसो गर्नु हँुदैन् यसो गर्नु हँुदैन् , समाजले यसो भन्छ लगायतका कुराहरु सिकाइन्छ । यस्ता कुरा उसको मनको इच्छा विपरित हुन्छ । आफ्ना भावना अरु सामु व्यक्त गर्न सक्दिनन् र भावना कुण्ठित हुदै जाँदा परिणाम स्वरुप हिस्टेरिया देखापर्छ । हिस्टेरिया किशोर किशोरीमा बढी देखापर्छ ।
हिस्टेरियाबाट कसरी बँच्ने ?
यसबाट बँच्ने सबै भन्दा उत्तम उपाय भनेकै मनका इच्छालाई सही व्यवस्थापन गर्नु नै हो । अभिभावकले छोराछोरीलाई पढाइ लगायत कुरामा अनावश्य दबाब नदिने । छोराछोरीसँग साथीको व्यवहार गर्ने, वा उनीहरुका भावना अभिभावकसँग सहजै भन्न सक्ने वातावरण बनाउने । शिक्षकले पनि विद्यार्थीलाई बढी डर त्रासमा नराख्ने, साथी साथीमा मेलमिलावको भावना सृजना गर्ने, शारीरिक परिवर्तनलाई सामान्य रुपमा लिने, कुनै कुरामा कमजोर छ भने उसको मनोबल उच्च बनाउन सहयोग गर्ने, नकारात्मक कुरा मनमा नलिने गर्नाले यस्तो समस्याबाट बँच्न सकिन्छ ।
हिस्टेरिया लागे पछि मानिसको मृत्यु भइहाल्छ त ?
हिस्टेरियाबाट बेहोस हुने बितिकै मानिसको मृत्यु भैहाल्छ भन्ने हुँदैन । आफ्नो जीवनशैलीमा सकारात्मकता ल्यायो र कुनै पनि भावनालाई कुण्ठित नगरि सहजतापूर्वक समधान गर्न सक्यो भने हिस्टेरिया लाग्दैन । यदि भइहाले पनि पूर्ण ठीक हुन्छ । तर लामो समयसम्म यसको वास्ता नगर्ने, एकछिन बेहोस हुन्छ अनि ठीक भैहाल्छ भनी उपचार गराएन भने चै डिप्रेसनमा जाने, माइग्रेनको समस्या हुने हुने लगायतका समस्या थपिदै जान्छ र गम्भीर परिणाम नल्याउलाभन्न सकिन्न ।
Last modified on 2019-01-03 14:58:52
नाक र घाँटीमा प्रदूषणले हुने समस्या र जोगिने उपायबारे डा.राई यसो भन्छन् (भिडियोसहित)
कोरोना महामारीमा अस्पतालमा अक्सिजन अभाव हुन नदिन अधिकारीको यस्तो छ सुझाव
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमः सामाजिक सुरक्षाको एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम बनोस्
ग्यास्ट्राइटिस अर्थात् ग्यास्ट्रिकबाट पीडित हुनुहुन्छ ? यी कुरामा ध्यान दिनुस
Dr. Pradeep Pandey
ललितपुरमा पहिलो पटक सि.टी. स्क्यानसहित विशेषज्ञ सेवा दिँदै एक्सपर्ट क्लिनिक
चितवनका अमृत काफ्लेः जो आफ्नो व्यक्तिगत गाडी प्रयोग गर्दै कोरोना संक्रमितको सेवामा खटिएका छन्
Samples Tested - २६,७२,७२६